Wiil Dhalinyaro Ah Kana Mid Ahaa Shaqaalaha Xafiiska Raysal Wasaaraha Somaliya Oo Ka Mid Noqdey Dadkii Ku Dhintey Diyaaradii Ethiopia Ee Bur Burtey
Sunday March 10, 2019 - 19:00:59 in Wararka by Wakiilka Ceerigaabo
Nairobi (Horseednews):- Wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxaya magaalada Bishoftu oo 60km u jirta caasimadda Itoobiya ee Adddis Ababa ayaa sheegaya in aysan jirin cid ka badbaaday shilkii diyaaradda ee saakay halkaas ka dhacay.
Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa goobta kusii wajahan, iyada oo dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in ay maqleen qarax aad u weyn, meeshana uu ka dhashay holac la damin la’yahay.
Dadka diyaaradda saaran ayaa u kala dhashay 33 jinsiyadood, balse weli lama hayo diiwaanka magacyada, inta lab ah iyo inta dhedeg ah, iyo waliba carruur.
Diyaaradda oo ah Boeing 737 ahna nooca rakaabka qaada ayaa burburtay xilli ay u kala gooshaysay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi.
Dadka Dhintay ayaa waxaa ku jiro sarkaal ka tirsanaa Xafiiska Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Cabdishakuur Maxamed Shahaad oo ka tirsanaa Hab Maamuuska Xafiiska Ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa ku geeriyooday Diyaaradda.
Cabdishakuur ayaa ka imaaday Sweden, wuxuuna Transit ku ahaa dalka Itoobiya oo uu doonayey inuu kaga sii gudbo Magaalada Nairobi oo ay ku wajahneyd diyaaradda Burburtay.
Wuxuu doonayey inuu Xamar kusoo laabto marka uu soo dhameysto howlo shaqo oo uu u adaayey Dalka kenya.
Sida ay Xaqiijisay Itoobiya Liiska waxaa Soomaaliya kaga jiro illaa halkaan qof oo ka tirsanaa Xafiiska Ra’isul wasaaraha inkastoo ay macquul tahay inay ku jiraan Soomaali kale oo heysato dhalashada wadamo kale.
Qoyska Cabdishakuur ayaa sheegay in wiilkooda uu raacay Diyaaradaas balse mar aan la xiriirnay Xafiiska Ra’isulwasaaraha ayaa sheegay inaysan hadda ka hadli karin dhimashada Cabdishakuur illaa ay si rasmi ah Ethiopian Airlines kaga soo bandhigeyso magacyada dadkii saarnaa Diyaaradda.
Haddaba halkaan hoose ka akhriso Liiska Wadamada dadkii Dhintay